I-ShazamKit ivumela abathuthukisi ukuthi bahlanganise i-Shazam kuzinhlelo zabo zokusebenza | Izindaba ze-IPhone
U-Angel Gonzalez | 19/06/2021 13:00 | iOS 15, I-WWDC 2021
Enye impumelelo enkulu ngokuya ngezinhlelo zokusebenza ngokungangabazeki Shazam. Lolu hlelo lokusebenza likuvumela ukuthi ubone ukuthi iyiphi ingoma ezwakala ngokuqopha ucezu oluncane noma ngomsindo wangemuva. Lokhu kufinyelelwa ngenxa yobuchwepheshe bokuqhathanisa phakathi kukhathalogi enkulu enezigidi zezingoma. Ngo-2017 i-Apple ithenge le nkampani futhi kusukela lapho isihlanganise bonke ubuchwepheshe bayo ezinhlelweni zayo zokusebenza. Manje yisikhathi sokukuthatha ukwedlula i-iOS ne-iPadOS ngokwethula ikhithi yokuthuthukisa ye-ShazamKit, lokho kuvumela abathuthukisi sebenzisa ubuchwepheshe ngaphakathi kwezinhlelo zakho zokusebenza, ngisho nonjiniyela be-Android.
I-Apple yakha ikhithi yentuthuko yokwazi umculo: ShazamKit
Thuthukisa imisebenzi kuzinhlelo zakho zokusebenza ngokubona umculo bese uxhuma abasebenzisi ngokukhululekile ngekhathalogi yomculo kaShazam. I-ShazamKit ikuvumela ukuthi ucebise ulwazi lwakho lohlelo lokusebenza ngokuvumela abasebenzisi ukuthi bathole igama lengoma, ukuthi ngubani oyiculile, uhlobo, nokuningi. Funda ukuthi umdlalo utholakalaphi engomeni ukuvumelanisa okuqukethwe nokuhlangenwe nakho komsebenzisi.
Este ikhithi yokuthuthukisa Akukona nje okweShazam nokwazi umculo. Kuqhubeka kakhulu: izophatha ubuchwepheshe obusetshenziswa nguShazam yezinhlelo zokusebenza zonjiniyela. Ngamanye amagama, umakhi manje useyakwazi ukukhiqiza imitapo yolwazi yabo futhi ayifake kuhlelo olufana neShazam. Ukuze wenze ngezifiso umuzwa wezinhlelo zakho zokusebenza.
Ngaphezu kwalokho, akudingekile ukuthi umculo udlalwe ngaphandle bese usebenzisa imibhobho yedivayisi ukuwuqopha, kodwa kunalokho ingaqoshwa endaweni, kusengaphambili okusetshenziswe yi-Apple ezinhlotsheni zakamuva zezinhlelo zayo zokusebenza.
Ngalolu hlelo olukhulu lokwethulwa oluvela kukhithi ye-ShazamKit, I-Apple iqedela uhambo olude lokunikezwa amandla kwezobuchwepheshe nokukhulisa kobuchwepheshe obabiza iBig Apple ngaphezu kwamadola ayizigidi ezingama-400.
Indlela ephelele ye-athikili: Izindaba ze-IPhone » iOS » iOS 15 » I-ShazamKit ivumela abathuthukisi ukuthi bahlanganise iShazam kuzinhlelo zabo zokusebenza